Vaovao - Ny fahalalana fototra amin'ny vera
Masinina fanontana roa vera
Masinina miendrika tsipika mahitsy
Masinina vita amin'ny vera
Masinina fanamafisana fitaratra
Masinina fanasan-damba fitaratra
Milina fandavahana vera
Masinina fanamboarana endrika fitaratra
Masinina Sandblasting Glass
Ny fahalalana fototra amin'ny vera
Momba ny hevitry ny vera
Glass, nantsoina koa hoe Liuli tany Sina taloha. Ny tarehin-tsoratra sinoa japoney dia solontenan'ny vera. Izy io dia singa mafy orina mangarahara izay mamorona rafitra tambajotra mitohy rehefa miempo. Mandritra ny fampangatsiahana dia mitombo tsikelikely ary mihamafy ny viscosity raha tsy misy kristaly. Ny firafitry ny ôksida simika tsotra fitaratra dia Na2O • CaO • 6SiO2, ary ny singa lehibe dia ny dioksida silikone.
Ny fitaratra dia tsy misakafo ara-tsimika amin'ny tontolo iainana andavanandro ary tsy mifanerasera amin'ny zavamananaina, noho izany dia be dia be izy io. Amin'ny ankapobeny dia tsy mety levona amin'ny asidra ny vera (ankoatr'izany: asidra hydrofluorika dia misy vera miaraka amin'ny vera mba hamoronana SiF4, izay mitondra mankany amin'ny harafesin'ny fitaratra), saingy mety levona amin'ny alkaly mahery izy io, toy ny cesium hidroksida. Ny dingam-pamokarana dia ny mampiempo ireo akora voafantina sahaza tsara ary mampamangatsiaka azy ireo haingana. Ny molekiola tsirairay dia tsy manana fotoana ampy hamoronana kristaly hamorona vera. Ny vera dia matevina amin'ny hafanan'ny efitrano. Izy io dia zavatra marefo miaraka amin'ny hamafin'ny Mohs 6.5.
Ny tantaran'ny vera
Ny fitaratra dia azo avy amina fanamafisana ny vatolampy asidra natsipy avy tamin'ny volkano. Talohan'ny taona 3700 talohan'i JK dia afaka nanao firavaka fitaratra sy vera tsotra ny Egyptianina taloha. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy afa-tsy vera miloko. Talohan'ny 1000 talohan'i JK dia nanamboatra vera tsy misy loko i Sina.
Tamin'ny taonjato faha-12 taorian'i JK dia niseho ny fitaratra fitadiavam-bola ho fifanakalozana ary nanomboka nanjary fitaovana indostrialy. Tamin'ny taonjato faha-18, hamaly ny filan'ny teleskaopy mivelatra dia novokarina ny vera optika. Tamin'ny 1873, Belzika no nitarika ny famokarana vera fisaka. Tamin'ny 1906, Etazonia dia namorona milina fitarihana vera fisaka. Tamin'ny 1959, ny British Pilkington Glass Company dia nanambara tamin'izao tontolo izao fa ny fizotran'ny float ho an'ny vera fisaka dia novolavolaina tamim-pahombiazana, izay revolisiona tamin'ny fizotran'ny famolavolana tany anaty tany. Nanomboka teo, miaraka amin'ny indostrian'ny indostrialy sy ny famokarana vera marobe, dia nisesisesy ny vera misy fampiasa isan-karazany sy ny fananana isan-karazany. Amin'izao vanim-potoana maoderina izao, ny vera dia nanjary iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, famokarana ary siansa sy teknolojia.
Adiresy:No.20-8 an'ny fampirantiana milina hazo any Lunjiao, tanànan'ny Lunjiao, tanànan'ny distrikan'i Shunde, faritanin'i Guangdong, Sina.